Sunday,4Mar, 2018 3:38 PM
भीमदत्तनगर, २० फागुन - कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका–७ सिमलफाटाका ३१ वर्षीय दिनेश विक परिवारको कमजोर आर्थिक हैसियतका कारण उच्च शिक्षा अध्ययनबाट वञ्चित हुनुभयो ।
एसएलसी पढ्दै गर्दा अध्यापन प्रभावित भएपछि इन्टरनेटको सहारामा विभिन्न कलात्मक मूर्तीहरु बनाउन थाल्नुभएका उहाँ पछिल्ला वर्षहरुमा विभिन्न देवीदेवताका मूर्ती बनाएर मासिक रु. ४० हजार भन्दा बढी आम्दानी गरिरहनुभएको छ । ‘अन्य खर्च कटाएर मासिक रु. ४० हजारभन्दा बढी नै बचत हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो – ‘परिश्रम गरे विदेशिनु पर्दैन ।’
सानै उमेरदेखि कलात्मक चित्रहरु बनाउन सौखिन विकले मूर्ति बनाउन थाल्नुभएको पनि एक दशक भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिले आधुनिक मूर्ति बनाउने यहाँ अरु कोही भेटेको छैन ।’ कञ्चनपुरका विभिन्न ठाउँका साथसाथै बैतडी, डडेल्धुरा र कैलालीबाट समेत आफ्नो मूर्तिको माग हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।